Aostralia: Hetsiky Ny Mponina Enti-manohitra Ny McDonald Any Amin’ny Vohitr’izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2013 3:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Nanana fifandraisana mivantana tamin’ny hetsi-panentanana anaty aterineto ny hetsika fanoheran'ireo mponina ny McDonald vaovao any amin'ny havoanan'i Melbourne any ivelan'ny tanànan'i Tecoma. Ny Oktobra 2012, nofoanan’ny fitsarana ara-panjakana ny fanapahan-kevitra nataon'ny Filankevitry ny tanàna handà faobe ny tolokevitra iray an’ny Maccas hanokatra fast food iray vaovao, .
Hatreto dia manana lahatsary telo ny vohikala Burgeroff mirakitra ny hetsi-panentanan'izy ireo. Ny voalohany dia navoaka tamin'ny fotoanan'ilay fanapahan-kevitra:
Ho fanampin'ireo fanasàna atidoha, fivoriana sy fidinana an-dalam-be, nitondra zava-mahafinaritra ho an'ireo hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny famelàna olona kely an-jatony eo amin'ny tohotohotry ny birao foiben'ny McDonald ireo mafana fo. Miandry ny “fanisàna ireo olona kely izahay”.
Hetsi-panoheran'ny Gnomeageddon any amin'ny foiben-toeran'ny McDonald any Melbourne
Sary nalaina tao amin'ny vohikala Burgeroff
Misy ilay pejy Facebook tsy azo ihodivirana: NO McDonalds in The Dandenong Ranges izay manana mpankafy eo amin'ny 6000 eo. @SAVE_TECOMA, ilay kaonty Twitter an'ny mpanohitra ny McDonald ao Tecoma, dia nampiasaina vao haingana izay ‘HANDETEHANA NY LAMIN'NY MACCAS!’
@SAVE_TECOMA: Androany izany no mitranga ry akama a. Azafady, afaka manone ve ianao 5 minitra, ny findainao ary ny feonao https://www.facebook.com/events/100475593476242/ …
Misy fanangonan-tsonia ao anaty aterineto nosoniavin'olona 9000.
Tenifofotra iray malaza ihany koa ny #burgeroff tamin'ny fanapariahana ny teny. I Freiheitdance (Kari) aza dia nanonona zanaka iray malaza avy ao amin'ny faritra:
‏@freiheitdance: #JulianAssange dia nipetraka tao Tecoma & Emerald. Manomboka eto ny hetsi-panovàna. Ndeha hangataka ny “tsy Burger avy ao Tecoma” aho izao. #burgeroff
John Weiss dia mpanohana ny firosoan'ny McDonald. Nifaniamby tamin'ireo mpanohitra azy izy tao amin'ilay vohikala Burgeroff ary nampiasa ny pejiny Facebook ho amin'ny fanaraha-maso ny firotsahan'ireo ankizy ho ao anatin'ny hetsi-panentanana:
Oao, lehibe maro mandrahona zazakely. Tsara kosa izany fanambaràna ho an'ny hevitrareo izany koa. Tsy misy afa-tsy ny fanararaotana ankizy avy aminà vondrona jiolahim-boto an-tsekoly!
Ny lahatsary farany, March Against Maccas (Diabe enti-manohitra ny Maccas), dia nandrakitra an-tsary ilay fidinana an-dalam-be ny 2 Martsa 2013:
Nanome toky ireo olona marobe efa ho 3000 fa “nijoro niaraka indray ny vondrom-piaraha-monina hanambara fa tsy hiverin-dàlana amin'ity ady ity izy ireo”.
Tsy ‘tia’ azy io mihitsy izy ireo!